बासै उठाउने, कस्तो यो खेल भो? जीवनमा धेरै-धेरै, धेरै नै झेल भो।
नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाको एकीकरण बदर गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यूूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा
फेरी परिस्थिती यस्तो भयो, माधव नेपाल पनि प्रचण्डलाई छोडेर ओली तिरै फर्किए
काठमाडौ । नेकपाको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाअनुसार एकीकरण हुनुअघिका एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्युँतिएपछि सबै भन्दा अप्ठेरो माधव नेपाल समुहलाई परेको छ । राजनीतिक उथल पुथलका बेलामा
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै विकसित राजनीतिक अवस्थाले अहिले तरंग उत्पन्न गराएको छ । सबैभन्दा धेरै अप्ठेरो प्रचण्ड छोडेका माओवादी केन्द्रका नेता तथा ओली छोडेका नेकपा एमालेका नेतालाई परेको छ । सर्वोच्चको
पेरिसडाँडामा प्रचण्ड – नेपालले गरे एमाले र माओवादी अलग अलग भएर छुट्टीने निर्णय, भयो विदाई बैठक
काठमाडौ । प्रचण्ड–नेपाल स्थायी समितिको बैठकले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको छ। सोमवार पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। सर्वोच्च
काठमाडौ । खुला राजनीतिमा आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ धुलोपिठो भएको संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रचण्ड र डा। बाबुराम भट्टराईले गलत बाटो लिएकाले यस्तो
अदालतले ओलीकै पक्षमा फैसला गरेको २४ घण्टा नपुग्दै ओलीलाई लाग्यो ठुलो झड्का, यति ठुलो समस्यामा परे ओली
नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्ष पूर्वएमालेमै फर्किने मनस्थितिमा पुगेर प्रचण्ड खेमासहितको स्थायी समिति बैठकमा सामेल भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकीकरण उल्ट्याइदिएपछि एमालेमा फर्किनुपर्ने
भर्खरै माधव नेपालले गरे यस्तो घोषणा, अब कार्यकर्ता के गर्लान ?
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछि अप्ठेरोमा परेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्ष नेकपा एमालेभित्रै रहने निर्णयमा पुगेका छन् । सर्वोच्चले नेकपाको मान्यता नदिएर पूर्ववत पार्टीमा फर्कन आदेश दिएपछि नेपाल पक्ष
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नयाँ रणनीति तय गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएको छ। सर्वोच्चले अप्रत्याशित निर्णय गरेको भन्ने प्रतिकृया दिएका प्रचण्ड नेपाल समुहले अबको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरू पुनःस्थापित नेकपा एमालेमा सामेल हुने भएका छन् । अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष